Nnwom 62 NA-TWI - Gyidi a ɛwɔ Onyankopɔn banbɔ mu - Bible Gateway
Nnwom 61Nnwom 63
Nnwom 62 Nkwa Asem (NA-TWI)
62 Metwɛn boasetɔ mu sɛ Onyankopɔn nnye me nkwa. Mede me ho to ɔno nko ara so. 2 Ɔno nko ara na ɔbɔ me ho ban gye me nkwa; ɔyɛ me gyefo enti obiara renni me so nkonim. 3 Mobɛkɔ so akɔ onipa a n’ahoɔden nnu ɔfasuw a abu agu yi so akosi da bɛn? 4 Pɛ ara na mopɛ sɛ motwe no fi n’anuonyam mu ba fam; mo ani gye atoro ho. Moka nhyira nsɛm mo ano a, mo koma mu de, modome no. 5 Onyankopɔn nko ara na mede me ho to ne so. M’anidaso wɔ ne mu. 6 Ɔno nko na ɔbɔ me ho ban gye me nkwa; ɔyɛ me gyefo na obiara rentumi nni me so nkonim.